Game စွဲနေတာကို စိတ်ရောဂါ ဖြစ်နေတာလို့ ထောက်ပြလိုက်တဲ့ WHO
19 Jun 2018 . 4:58 PM
နည်းပညာတွေ ထွန်းကားလာတဲ့ ၂၀ ရာစု နောက်ပိုင်း ဖျော်ဖြေရေး (Entertainment) ကဏ္ဍမှာ သိသိသာသာ ပြောင်းလဲလာတဲ့ ပြယုဒ်တစ်ခုက Digital or Video Game တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ Game ကစားခြင်းကို Sport တစ်ခု အနေနဲ့ မသတ်မှတ်သေးခင် ကာလတုန်းက လူတွေဟာ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှား အားကစား (Physical Exercise) တစ်ခုခု ပြုလုပ်လေ့ရှိပါတယ်။ ဒီ အားကစား လေ့ကျင့်ခန်းတွေဟာ သွေးလည်ပတ်မှု အားကောင်းစေပြီး ကျန်းမာရေးတွက် ညီညွတ်တဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီနောက်ပိုင်း Mind Gaming ဒါမှမဟုတ် Mental Exercise လို့ခေါ်တဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ တီထွင်ဖန်တီးမှု အားကောင်းလာဖို့ စစ်တုရင်ထိုးခြင်း၊ သင်္ချာတွက်ခြင်း၊ ဥာဏ်စမ်း ပဟေဠိ ဖြေခြင်းစတဲ့ Mini Puzzle Game လေးတွေ ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။
အဲ့ဒီတုန်းက Game တွေကို ပညာရပ် တစ်ခုအနေနဲ့ အသုံးပြုခဲ့တာဖြစ်ပေမယ့် ခေတ်ရေစီးကြောင်း တစ်ဖြည်းဖြည်း ပြောင်းလဲလာတဲ့အခါ သာမန်အဆင့် Game ကစားခြင်းထက် ပိုနက်နဲတဲ့ Game တွေ ဖန်တီးလာတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၁ ရာစု အစောပိုင်းကာလ တိုင်းတာချက်တွေအရ အမေရိကန် တစ်နိုင်ငံထဲ Game ကစားသူဦးရေ သန်း ၄၀ ကျော် ရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပြီး ၂၀၁၅ ခုနှစ်မှာ ၁၅၅ သန်း အထိ များပြားလာတာဖြစ်ပါတယ်။ လေ့လာချက်တွေအရ တစ်ပတ်ကို ၅ နာရီ ဝန်းကျင် ကစားလေ့ရှိကြပြီး ၂၀၁၆ ခုနှစ် တစ်နှစ်ထဲမှာ အမေရိကန်က Gamer တွေဟာ ကန်ဒေါ်လာ ၁ ဘီလီယံကျော် Game ကစားခြင်းအတွက် အသုံးချခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
Group of Teenagers taking part in E-Sport Match
၂၀၁၇ – ၂၀၁၈ တိုင်းတာချက်တွေအရ တရုတ်ပြည်ဟာ Game ကစားသူဦးရေ အများဆုံးအဖြစ် ရပ်တည်လျက်ရှိနေပြီး ဖော်ပြထားချက်တွေအရ Game ကစားခြင်းကြောင့် ၁၀ ဦးထက် မနည်း သေဆုံးခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုလို Game ကစားခြင်းကြောင့် သေဆုံးခြင်း ဖြစ်စဉ်တွေနဲ့ ဆက်စပ်ပြီး သုတေသနပြုနေသူ တစ်ဦးက WHO (World Health Organization) ဖြစ်ပါတယ်။ WHO အနေနဲ့ Game ကစားခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာမယ့် နောက်ဆက်တွဲ ပြဿနာတွေကို နှစ်ကာလ တော်တော်ကြာကြာ သုတေသန ပြုလုပ်နေတာဖြစ်ပြီး Game စွဲနေတာကို စိတ်ရောဂါ ခံစားနေရခြင်း ဆိုတဲ့အကြောင်း 11th Edition Diagnostic Handbook မှာ အတိအလင်း ကြေညာလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။
အခုလို Game ကစားခြင်းကြောင့် စိတ်ဝေဒနာ ဖြစ်ခြင်းနဲ့ ပတ်သက်လို့ တချို့ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေက လက်ခံထားခြင်း မရှိသေးပါဘူး။ အမေရိကန်မှာ Game ကစားခြင်းနဲ့ ပတ်သက်လို့ တားမြစ်ချက် ရှိတယ်ဆိုပေမယ့် ထိရောက်တဲ့ အရေးယူမှု ပြုလုပ်ခြင်း မရှိပါဘူး။ ကလေးတွေ အနေနဲ့ Game ကစားဖို့ပဲ အာရုံရောက်နေတာကို အမေရိကန်မှာရှိတဲ့ မိခင်တွေက “ခေတ်သစ် မူးယစ်ဆေးဝါး” “Digital Heroin” နဲ့ နှိုင်းယှဉ်ထားသလို “ကမ္ဘာပေါ်မှာ ရှိတဲ့ အစွဲလမ်းစေနိုင်ဆုံး ပစ္စည်းတစ်ခုကို တပ်မက်နေခြင်း “လို့ CNN သတင်းဌာနမှာ ပြောဆိုထားတာ တွေ့ရပါတယ်။ လက်တွေ့မှာလည်း Game စွဲတဲ့ ပြဿနာကို ကျန်းမာရေး ချို့ယွင်းချက်တစ်ခုအနေနဲ့ ဘယ်သူမှ လက်ခံထားတာ မဟုတ်သလို WHO က Gaming Disorder ဖြစ်ခြင်းကို သုတေသန ရလာဒ်တွေနဲ့ ထောက်ပြထားပါတယ်။
Gaming Disorder နဲ့ ပတ်သက်လို့ WHO ဆိုလိုရင်းဟာ အာရုံစူးစိုက်နိုင်မှု အားနည်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အခုလို လူတစ်ယောက် Gaming Disorder ဖြစ်မဖြစ်ကို အချက် ၃ ချက်နဲ့ ပြောနိုင်မှာဖြစ်ပြီး ပထမဆုံး အချက် အနေနဲ့ Game ကစားခြင်းဟာ အရေးကြီးဆုံး ဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့ အချက်ဖြစ်ပါတယ်။ သာမန်လူတစ်ယောက်ဟာ တစ်နေ့တာ အချိန်တွေ ဘယ်လိုအသုံးချမလဲဆိုတာ စီမံနိုင်မှာဖြစ်ပေမယ့် Game စွဲနေသူဟာ Game ကစားဖို့ပဲ အာရုံထားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒုတိယ အနေနဲ့ မရပ်မနား Game ကစားခြင်းဖြစ်ပြီး ဆိုးရွားတဲ့ အကျိုးဆက်တွေ ပါဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ WHO က ထောက်ပြထားချက်မှာ Game ကြာကြာ ကစားလေ့ရှိသူတွေဟာ လုပ်ငန်းခွင်မှာ စွမ်းဆောင်ရည် ကျဆင်းစေလာတဲ့ အချက်ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ဆက်တွဲ အနေနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်အပေါ် အာရုံစူးစိုက်နိုင်မှု မရှိတော့ဘဲ ကျန်းမာရေး ထိခိုက်စေတဲ့အထိ ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ အချက် ဖြစ်ပါတယ်။
Are You also Addicted to Games?
တတိယ အချက်မှာတော့ Game ကစားခြင်းကြောင့် လူမှုရေး ညံ့ဖျင်း၊ သိမ်ဖျင်းတဲ့သူ ဖြစ်စေတဲ့ အချက်ကို WHO က ထောက်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအချက်မှာ မိသားစုဝင်တွေအကြား ကြုံတွေ့နိုင်ရတဲ့ ပြဿနာမျိုးပါဝင်ပြီး ဥပမာ အနေနဲ့ Game ကစားဖို့ ငွေလိုခြင်းကြောင့် ခိုးယူခြင်း၊ သူငယ်ချင်း အပေါင်းသင်းတွေ အကြား စာနာစိတ်နဲ့ ကိုယ်ချင်းစာစိတ် မရှိခြင်း၊ လျစ်လျူရှုခြင်းစတဲ့ ညံ့ဖျင်းတဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အားနည်းချက်တွေ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် လူတစ်ယောက်ဟာ အခုလို အချက် ၃ ချက် နဲ့ ကိုက်ညီနေရင် Game စွဲနေပြီဆိုတာ ပြောပြနိုင်တဲ့ အချက်တွေဖြစ်ပါတယ်။ WHO အနေနဲ့ Game စွဲတဲ့ စိတ်ရောဂါဟာ ချက်ချင်းဖြစ်နိုင်တဲ့ ရောဂါမျိုး မဟုတ်ဘဲ အခုလို အချက်တွေနဲ့ ပြည့်စုံလာဖို့ အချိန် ၁ နှစ် ခန့် ကြာလေ့ရှိတယ်လို့ ဖြည့်စွက် ပြောကြားထားပါတယ်။
WHO အဖွဲ့ရဲ့ စိတ်ပညာရှင်ဖြစ်သူ Vladimir Poznyak က “Game ရောဂါကုထုံးနဲ့ ပတ်သက်လို့ လိုက်နာရမယ့် အချက်တွေ ညွန်ကြားသွားမှာ မဟုတ်ပါဘူး၊ WHO အနေနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နေတဲ့ ခေတ်ရေစီးကြောင်းနဲ့အညီ လူတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အခန်းကဏ္ဍတစ်ခု အနေနဲ့ ပါဝင်ခြင်း”လို့သာ ပြောကြားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၆ ခုနစ်တုန်းကလည်း ကျွမ်းကျင်သူတွေဟာ WHO ကို International Statistical Classification of Diseases (ICD) မှာ Gaming Disorder နဲ့ ပတ်သက်လို့ အဆို တင်သွင်းခြင်း မပြုဖို့ ရေးသားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
It can lead Mental illness
အဲ့ဒီတုန်းက WHO က ဆောင်ရွက်နေတဲ့ သုတေသန လုပ်ငန်းစဉ်တွေဟာ လုံလောက်တဲ့ အကြောင်းပြချက်မရှိပဲ Game စွဲလမ်းတာကို စိတ်ရောဂါဖြစ်တာနဲ့ ဆက်စပ်နေပါတယ်ဆိုတဲ့ အချက်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အငြင်းပွားမှုတွေ ပြင်းထန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ လက်တွေ့မှာလည်း Game ကစားလို့ စိတ်ရောဂါဖြစ်လာခဲ့ရင် ဆေးပညာနဲ့ အညီ ကုသနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့ အားနည်းချက်တွေကြောင့် မအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူး။ အဲ့ဒါနဲ့ ဆက်စပ်ပြီး စိတ်ပညာရှင် Anthony Bean က CNN သတင်းဌာနကို အခုလို ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
“ကျွန်တော်ဟာ ဆေးပညာရှင် မဟုတ်သလို သုတေသန ပညာရှင်လည်း မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် နေ့တိုင်းမြင်တွေ့နေရတဲ့ Video Game ကစားသူအမျာစုဟာ အနည်းနဲ့အများ Game စွဲ နေသူတွေ ဖြစ်တယ်ဆိုတာတော့ ပြောနိုင်ပါတယ်။”
အဲ့ဒါအပြင် Bean က Game စွဲနေလို့ ဖြစ်လာမယ့် စိတ်ရောဂါနဲ့ ဆက်စပ်ပြီး “ဘယ်လို ခံစားနိုင်ရသလဲဆိုတာ ပြောပြဖို့ခက်သလို ဝေဒနာ အပျင်း၊ အပျော့ ခွဲခြားဖို့လည်း ခက်ခဲပါတယ်။ ကျွန်တော့် အနေနဲ့ ရောဂါ ဘယ်လိုကုသမလဲဆိုတာထက် နာမည်ပေးဖို့တောင် အချိန် စောနေသေးသလား” လို့ တအံ့တသြ CNN သတင်းဌာနမှာ ပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။
Ref: The Verge, Engadget, CNN, WHO
Game စှဲနတောကို စိတျရောဂါ ဖွဈနတောလို့ ထောကျပွလိုကျတဲ့ WHO
နညျးပညာတှေ ထှနျးကားလာတဲ့ ၂၀ ရာစု နောကျပိုငျး ဖြျောဖွရေေး (Entertainment) ကဏ်ဍမှာ သိသိသာသာ ပွောငျးလဲလာတဲ့ ပွယုဒျတဈခုက Digital or Video Game တှပေဲဖွဈပါတယျ။ Game ကစားခွငျးကို Sport တဈခု အနနေဲ့ မသတျမှတျသေးခငျ ကာလတုနျးက လူတှဟော ကိုယျလကျလှုပျရှား အားကစား (Physical Exercise) တဈခုခု ပွုလုပျလရှေိ့ပါတယျ။ ဒီ အားကစား လကေ့ငျြ့ခနျးတှဟော သှေးလညျပတျမှု အားကောငျးစပွေီး ကနျြးမာရေးတှကျ ညီညှတျတဲ့ လှုပျရှားမှုတှေ ဖွဈပါတယျ။ အဲ့ဒီနောကျပိုငျး Mind Gaming ဒါမှမဟုတျ Mental Exercise လို့ချေါတဲ့ စိတျပိုငျးဆိုငျရာ တီထှငျဖနျတီးမှု အားကောငျးလာဖို့ စဈတုရငျထိုးခွငျး၊ သင်ျခြာတှကျခွငျး၊ ဥာဏျစမျး ပဟဠေိ ဖွခွေငျးစတဲ့ Mini Puzzle Game လေးတှေ ပျေါထှကျလာခဲ့ပါတယျ။
အဲ့ဒီတုနျးက Game တှကေို ပညာရပျ တဈခုအနနေဲ့ အသုံးပွုခဲ့တာဖွဈပမေယျ့ ခတျေရစေီးကွောငျး တဈဖွညျးဖွညျး ပွောငျးလဲလာတဲ့အခါ သာမနျအဆငျ့ Game ကစားခွငျးထကျ ပိုနကျနဲတဲ့ Game တှေ ဖနျတီးလာတာ ဖွဈပါတယျ။ ၂၁ ရာစု အစောပိုငျးကာလ တိုငျးတာခကျြတှအေရ အမရေိကနျ တဈနိုငျငံထဲ Game ကစားသူဦးရေ သနျး ၄၀ ကြျော ရှိနခေဲ့တာဖွဈပွီး ၂၀၁၅ ခုနှဈမှာ ၁၅၅ သနျး အထိ မြားပွားလာတာဖွဈပါတယျ။ လလေ့ာခကျြတှအေရ တဈပတျကို ၅ နာရီ ဝနျးကငျြ ကစားလရှေိ့ကွပွီး ၂၀၁၆ ခုနှဈ တဈနှဈထဲမှာ အမရေိကနျက Gamer တှဟော ကနျဒျေါလာ ၁ ဘီလီယံကြျော Game ကစားခွငျးအတှကျ အသုံးခခြဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။
၂၀၁၇ – ၂၀၁၈ တိုငျးတာခကျြတှအေရ တရုတျပွညျဟာ Game ကစားသူဦးရေ အမြားဆုံးအဖွဈ ရပျတညျလကျြရှိနပွေီး ဖျောပွထားခကျြတှအေရ Game ကစားခွငျးကွောငျ့ ၁၀ ဦးထကျ မနညျး သဆေုံးခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။ အခုလို Game ကစားခွငျးကွောငျ့ သဆေုံးခွငျး ဖွဈစဥျတှနေဲ့ ဆကျစပျပွီး သုတသေနပွုနသေူ တဈဦးက WHO (World Health Organization) ဖွဈပါတယျ။ WHO အနနေဲ့ Game ကစားခွငျးကွောငျ့ ဖွဈပျေါလာမယျ့ နောကျဆကျတှဲ ပွဿနာတှကေို နှဈကာလ တျောတျောကွာကွာ သုတသေန ပွုလုပျနတောဖွဈပွီး Game စှဲနတောကို စိတျရောဂါ ခံစားနရေခွငျး ဆိုတဲ့အကွောငျး 11th Edition Diagnostic Handbook မှာ အတိအလငျး ကွညောလိုကျတာဖွဈပါတယျ။
အခုလို Game ကစားခွငျးကွောငျ့ စိတျဝဒေနာ ဖွဈခွငျးနဲ့ ပတျသကျလို့ တခြို့ ကြှမျးကငျြပညာရှငျတှကေ လကျခံထားခွငျး မရှိသေးပါဘူး။ အမရေိကနျမှာ Game ကစားခွငျးနဲ့ ပတျသကျလို့ တားမွဈခကျြ ရှိတယျဆိုပမေယျ့ ထိရောကျတဲ့ အရေးယူမှု ပွုလုပျခွငျး မရှိပါဘူး။ ကလေးတှေ အနနေဲ့ Game ကစားဖို့ပဲ အာရုံရောကျနတောကို အမရေိကနျမှာရှိတဲ့ မိခငျတှကေ “ခတျေသဈ မူးယဈဆေးဝါး” “Digital Heroin” နဲ့ နှိုငျးယှဥျထားသလို “ကမ်ဘာပျေါမှာ ရှိတဲ့ အစှဲလမျးစနေိုငျဆုံး ပစ်စညျးတဈခုကို တပျမကျနခွေငျး “လို့ CNN သတငျးဌာနမှာ ပွောဆိုထားတာ တှရေ့ပါတယျ။ လကျတှမှေ့ာလညျး Game စှဲတဲ့ ပွဿနာကို ကနျြးမာရေး ခြို့ယှငျးခကျြတဈခုအနနေဲ့ ဘယျသူမှ လကျခံထားတာ မဟုတျသလို WHO က Gaming Disorder ဖွဈခွငျးကို သုတသေန ရလာဒျတှနေဲ့ ထောကျပွထားပါတယျ။
Gaming Disorder နဲ့ ပတျသကျလို့ WHO ဆိုလိုရငျးဟာ အာရုံစူးစိုကျနိုငျမှု အားနညျးခွငျးဖွဈပါတယျ။ အခုလို လူတဈယောကျ Gaming Disorder ဖွဈမဖွဈကို အခကျြ ၃ ခကျြနဲ့ ပွောနိုငျမှာဖွဈပွီး ပထမဆုံး အခကျြ အနနေဲ့ Game ကစားခွငျးဟာ အရေးကွီးဆုံး ဖွဈနတေယျဆိုတဲ့ အခကျြဖွဈပါတယျ။ သာမနျလူတဈယောကျဟာ တဈနတေ့ာ အခြိနျတှေ ဘယျလိုအသုံးခမြလဲဆိုတာ စီမံနိုငျမှာဖွဈပမေယျ့ Game စှဲနသေူဟာ Game ကစားဖို့ပဲ အာရုံထားမှာ ဖွဈပါတယျ။ ဒုတိယ အနနေဲ့ မရပျမနား Game ကစားခွငျးဖွဈပွီး ဆိုးရှားတဲ့ အကြိုးဆကျတှေ ပါဝငျနတောဖွဈပါတယျ။ WHO က ထောကျပွထားခကျြမှာ Game ကွာကွာ ကစားလရှေိ့သူတှဟော လုပျငနျးခှငျမှာ စှမျးဆောငျရညျ ကဆြငျးစလောတဲ့ အခကျြဖွဈပါတယျ။ နောကျဆကျတှဲ အနနေဲ့ ပတျဝနျးကငျြအပျေါ အာရုံစူးစိုကျနိုငျမှု မရှိတော့ဘဲ ကနျြးမာရေး ထိခိုကျစတေဲ့အထိ ဖွဈစနေိုငျတဲ့ အခကျြ ဖွဈပါတယျ။
တတိယ အခကျြမှာတော့ Game ကစားခွငျးကွောငျ့ လူမှုရေး ညံ့ဖငျြး၊ သိမျဖငျြးတဲ့သူ ဖွဈစတေဲ့ အခကျြကို WHO က ထောကျပွထားတာဖွဈပါတယျ။ ဒီအခကျြမှာ မိသားစုဝငျတှအေကွား ကွုံတှနေို့ငျရတဲ့ ပွဿနာမြိုးပါဝငျပွီး ဥပမာ အနနေဲ့ Game ကစားဖို့ ငှလေိုခွငျးကွောငျ့ ခိုးယူခွငျး၊ သူငယျခငျြး အပေါငျးသငျးတှေ အကွား စာနာစိတျနဲ့ ကိုယျခငျြးစာစိတျ မရှိခွငျး၊ လဈြလြူရှုခွငျးစတဲ့ ညံ့ဖငျြးတဲ့ စိတျပိုငျးဆိုငျရာ အားနညျးခကျြတှေ ဖွဈပျေါလာနိုငျတာ ဖွဈပါတယျ။ အဲ့ဒါကွောငျ့ လူတဈယောကျဟာ အခုလို အခကျြ ၃ ခကျြ နဲ့ ကိုကျညီနရေငျ Game စှဲနပွေီဆိုတာ ပွောပွနိုငျတဲ့ အခကျြတှဖွေဈပါတယျ။ WHO အနနေဲ့ Game စှဲတဲ့ စိတျရောဂါဟာ ခကျြခငျြးဖွဈနိုငျတဲ့ ရောဂါမြိုး မဟုတျဘဲ အခုလို အခကျြတှနေဲ့ ပွညျ့စုံလာဖို့ အခြိနျ ၁ နှဈ ခနျ့ ကွာလရှေိ့တယျလို့ ဖွညျ့စှကျ ပွောကွားထားပါတယျ။
WHO အဖှဲ့ရဲ့ စိတျပညာရှငျဖွဈသူ Vladimir Poznyak က “Game ရောဂါကုထုံးနဲ့ ပတျသကျလို့ လိုကျနာရမယျ့ အခကျြတှေ ညှနျကွားသှားမှာ မဟုတျပါဘူး၊ WHO အနနေဲ့ ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျနတေဲ့ ခတျေရစေီးကွောငျးနဲ့အညီ လူတှကွေုံတှနေ့ရေတဲ့ ကနျြးမာရေးဆိုငျရာ အခနျးကဏ်ဍတဈခု အနနေဲ့ ပါဝငျခွငျး”လို့သာ ပွောကွားခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။ ၂၀၁၆ ခုနဈတုနျးကလညျး ကြှမျးကငျြသူတှဟော WHO ကို International Statistical Classification of Diseases (ICD) မှာ Gaming Disorder နဲ့ ပတျသကျလို့ အဆို တငျသှငျးခွငျး မပွုဖို့ ရေးသားဖျောပွခဲ့ပါတယျ။
အဲ့ဒီတုနျးက WHO က ဆောငျရှကျနတေဲ့ သုတသေန လုပျငနျးစဥျတှဟော လုံလောကျတဲ့ အကွောငျးပွခကျြမရှိပဲ Game စှဲလမျးတာကို စိတျရောဂါဖွဈတာနဲ့ ဆကျစပျနပေါတယျဆိုတဲ့ အခကျြနဲ့ ပတျသကျပွီး အငွငျးပှားမှုတှေ ပွငျးထနျခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ လကျတှမှေ့ာလညျး Game ကစားလို့ စိတျရောဂါဖွဈလာခဲ့ရငျ ဆေးပညာနဲ့ အညီ ကုသနိုငျခွငျးမရှိတဲ့ အားနညျးခကျြတှကွေောငျ့ မအောငျမွငျခဲ့ပါဘူး။ အဲ့ဒါနဲ့ ဆကျစပျပွီး စိတျပညာရှငျ Anthony Bean က CNN သတငျးဌာနကို အခုလို ပွောကွားခဲ့ပါတယျ။
“ကြှနျတျောဟာ ဆေးပညာရှငျ မဟုတျသလို သုတသေန ပညာရှငျလညျး မဟုတျပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ ကြှနျတျော နတေို့ငျးမွငျတှနေ့ရေတဲ့ Video Game ကစားသူအမြာစုဟာ အနညျးနဲ့အမြား Game စှဲ နသေူတှေ ဖွဈတယျဆိုတာတော့ ပွောနိုငျပါတယျ။”
အဲ့ဒါအပွငျ Bean က Game စှဲနလေို့ ဖွဈလာမယျ့ စိတျရောဂါနဲ့ ဆကျစပျပွီး “ဘယျလို ခံစားနိုငျရသလဲဆိုတာ ပွောပွဖို့ခကျသလို ဝဒေနာ အပငျြး၊ အပြော့ ခှဲခွားဖို့လညျး ခကျခဲပါတယျ။ ကြှနျတေျာ့ အနနေဲ့ ရောဂါ ဘယျလိုကုသမလဲဆိုတာထကျ နာမညျပေးဖို့တောငျ အခြိနျ စောနသေေးသလား” လို့ တအံ့တသွ CNN သတငျးဌာနမှာ ပွောကွားသှားခဲ့ပါတယျ။